‘फेरि केपी ओलीसँग झुक्ने काम गर्ने छैनौं ।’: माधव नेपाल - Rastrakokhabar
९ माघ २०७७, शुक्रबार १५:४१
काठमाडौं, ९ माघ । नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले शुक्रबारको प्रदर्शनमा जनआन्दोलनको झल्को देखिएको बताएका छन् । तर यो कास्टिङ मात्र भएको भन्दै उनले भने, ‘फिल्म सुरु हुन बाँकी नै छ ।’
आफ्नो समूहले काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै नेपालले ओलीलाई पार्टीले दण्ड दिन सुरु गरिसकेको बताएका छन । अध्यक्षबाट हटाउनुका साथै साधारण सदस्यबाट किन नहटाउने भनेर स्पष्टीकरण सोधिएको बताएका छन । आफू भर्खर सुर्खेतबाट आएको भन्दै अध्यक्ष नेपालले भने, ‘उहाँले कतै मैले गल्ती गरेँ भनेर पत्र पो पठाएको छन् कि ? म पनि संसद पुनस्स्थापनाको आन्दोलन सहभागी हुन्छु भन्नु भएको छ कि ? मैले हाम्रा नेताहरुलाई सोध्न पाएको छैन ।’
तर त्यस्तो जवाफ नआएको भन्दै उनले भने, ‘फेरि केपी ओलीसँग झुक्ने काम गर्ने छैनौं ।’
नेपालले यसअघि तानाशाहहरुले संसद विघटन गर्ने इतिहास रहेकामा प्रधानमन्त्री ओली ती सबैभन्दा माथि पुगेको बताएका छन् । ओली नवतानाशाह बनेका पनि उनको भनाइ छ ।
पार्टीमा ओलीले ५० वर्षदेखि आफूलाई दुःख दिएको नेपालले बताएका छन । अहिले पार्टी एकतापछि प्रचण्डलाई पनि ओलीले यसरीनै सताएको उनले बताएका छन । संसद विघटन गरेर ओलीले संवैधानिक कू गरेको भन्दै उनले ओली अब उप्रान्त कम्युनिष्ट नरहेको बताएका छन ।
Previous Post	ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर देश र जनताप्रति गम्भीर धोका दिए : खनाल
Next Post	मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेस
ओली समुह सँग एकता सम्भव छैन : प्रचण्ड–माधव समूह
१२ फाल्गुन २०७७, बुधबार १७:१८